Josep Maria Bartomeu oo ka hadlay mustaqbalka Ousmane Dembélé ee kooxda Barcelona – Gool FM
Josep Maria Bartomeu oo ka hadlay mustaqbalka Ousmane Dembélé ee kooxda Barcelona
(Barcelona) 02 Juunyo 2018. Madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa wuxuu ka hadlay mustaqbalka da’ayarka xulka qaranka france ee Ousmane Dembélé, maadaama ay xiiseenayaan saxiixiisa kooxaha Liverpool iyo Arsenal.
Josep Maria Bartomeu ayaa kaga warbixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spainmustaqbalka Ousmane Dembélé wuxuuna yiri: “Ousmane Dembélé iyo Philippe Coutinho waxay muhiim u yihiim mashruuca kooxdeena, waxaana ka fileenaa wax badan”.
“Coutinho wuxuu ahaa mid aad u firfircoon afartii bilood ee la soo dhaafay, Dembélé waa ciyaaryahan da ‘yar oo tayo leh waxaana ka filaneynaa waxyaabo waaweyn”.
“Xilli ciyaareedka soo socda wuu ka duwanaan doonaa, ma ahan wax sahlan inaad ku ciyaarto Barcelona kooxdii hore sababtoo ah qaab ciyaareedka kubada cagta halkan ayuu ka duwan yahay inta kale”
“Waxaa imaan doona xidigo dhowr ah waxaana bixi doono kuwo kale, taasina waa mid iska caadi ah, laakiin waa iyadoo aan la sheegi doonin wax magac ah”.
SAWIRRO: Arsene Wenger oo lagu arkay WABIGA Cam, xilli lala xiriirinayo Real Madrid
Tartanka Da’yarta kooxaha heerka koowaad oo gaba gaba soo gaaray (Jeenyo Vs Banaadir,Heegan Vs Elman)